Zimbabwe (Ranked 142nd) :: Legatum Prosperity Index 2021
Estonia (17th) is the most prosperous country in Eastern Europe, ranking in the top 25 for all but one pillar. It has seen particular improvement in its Living Conditions over the past decade, with 88% now able to live on their household income, up from just 59% in 2011.
Ranked 142nd of 167
142 nd on the Legatum
Social Capital 137th
Investment Environment 140th
Enterprise Conditions 150th
Infrastructure & Market Access 137th
Economic Quality 147th
Living Conditions 136th
Natural Environment 129th
Zimbabwe is 142nd in the overall Prosperity Index rankings. Since 2011, Zimbabwe has moved up the rankings table by 8 places.
Zimbabwe performs most strongly in Education and Safety & Security but is weakest in Enterprise Conditions. The biggest improvement compared to a decade ago came in Safety & Security.
Visit our Rankings table to see how Zimbabwe compares to other countries.